Ku beddel Qiimahaaga Websaydhyada Boos celinta Tooska ah ee dallacsiinta Zeevou
Features » dallacaadaha
Kaxee gawaarida badan adoo maraya boggaaga ballansashada tooska ah adoo dejinaya oo soo bandhigaya qiimo dhimis.
Meelaha qaarkood ee lagu socodsiinayo ganacsigaaga PMS, waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato qiimahaaga. Waxay kuxirantahay xaalado iyo istiraatiijiyado kala duwan, guryaha aad ku dallacdo OTA-yada kala duwan waxay yeelan karaan oo laga yaabee inay ku kala duwanaan doonaan qiime kala duwan boggaaga ballansashada tooska ah. Iyada oo leh Muuqaalkayaga Dhiirrigelinta, qiimaha cusub ayaa si fudud loo qaabeyn karaa.
Inta badan martida loo yahay waxay ku faraxsan yihiin inay hoos u dhigaan qiimaha ay ku bixiyaan OTAs iyo goobaha liistada kaligood toos u dalbashada degellada. Marka sidaas la sameeyo, waxay si wax ku ool ah u kala qaybin karaan guddiga ay ku badbaadinayaan martidooda. Tani waa xaalad guul-guul ah oo ku siin karta martida qiimo dhimis jaale toos ah.
Hal arin oo muhiim ah waa dhibaato la xiriirta hoos u dhigida qiimaha guryahaaga. Qaar badan mishiinka ballansashada adeeg bixiyayaashu ma bixiyaan awoodan sicir-dhimista ama ku dhimista habka aad isku dayeyso inaad ku guuleysato. Isku darka dallacsiinta ayaa badanaa sababi kara arrimo, maaddaama habka dhimista guud loo xisaabiyo ay dhibaato noqon karto.
Xitaa haddii waxyaalaha kor ku xusan aysan keenin arrin weli waxaa laga yaabaa inay dhibaatooyin ka jiraan xeeladaha suuqgeynta. Waxaad ubaahantahay ikhtiyaarro cad oo toosan. Xaalado badan, martida loo yahay waxay la kulmi karaan dhibaatooyin markay isku dayayaan inay kiciyaan dallacsiinta taasoo sababi karta isku dhacyada qiimaha.
Tusaale ahaan; haddii aad rabto inaad ku dhigto qiimo dhimis kaliya hal ama laba guri, laakiin nidaamkaagu kuuma oggolaan doono. Ama waxaa jira munaasabad gaar ah oo aad u aragto inay ku habboon tahay siinta macaamiishaada iyo martidaada qiimo dhimis wanaagsan xilliyada qaarkood. Zeevou waxaad si sahal ah uga adkaan kartaa arimahan oo aad ku socodsiin kartaa dallacsiinta sida iyo goortaad rabto moodooyinka qiimeynta ee ugu fiican ganacsigaaga.
Sidee dallacsiinta Zeevou wax u tari kartaa?
Zeevou way aqoonsan tahay arintan waxayna ku maalgashatay muuqaalkeeda 'Promotion' si ay kaaga caawiso inaad sida ugu badan uga faa'iideysato waqtigaaga, lacagtaada, iyo xeeladahaaga. Waxaan diyaarinay nidaam horumarsan oo dhismaha iyo ku dalabinta dalacsiinta noocyada unugyada gaarka ah. Adoo isticmaalaya muuqaalka 'Promotion' ee Zeevou, martigaliyayaashu waxay awoodaan inay cadeeyaan goorta dallacsiintu ay tahay in la xajisto, iyo taariikhda ay tahay inay ku dabaqaan. Sidaa darteed, dhibaatada haysashada isla dallacsiinta oo lagu dabaqay dhammaan guryaha iyo maalmaha ayaa xallinaya. Intaa waxaa sii dheer, waxaan siinnaa martida martigelinta fursad ay ku helaan marin buuxda oo ku saabsan qeexidda shuruudaha u baahan inay la kulmaan kuwa tooska ah si ay u helaan dallacsiinta.
Dalacsiinta waxaa lagu soo bandhigi karaa iyada oo loo marayo mishiinka ballansashada lagu dhisay Zeevou's gebi ahaanba bilaash ah toos u dalbashada degellada. Marka, martidu waxay si fudud ugu heli karaan dallacaadaha ay fidiyaan martigaliyayaashoodu waxayna u isticmaali karaan inay ku helaan sicir-dhimistooda. Sidan oo kale, martigaliyayaashu waxay lahaan karaan fikir iyo aragti cad oo ku saabsan geedi socodka waxayna hubinayaan sida habsami leh ee buugaagtani u dhacayaan. Muuqaalkaani, wuxuu yareeyaa culeyska jahwareerka ee ku dhici kara martida inta la isticmaalayo qiima dhimista oo awood u siineysa inay yeeshaan khibrad jaale oo weyn. Martigeliyayaashu sidaas way iibin karaan habeenadooda qolkooda, ama xirmooyinka ay ka mid yihiin dar-ons, qiime ka fiican tan martida ay ku heli doonaan mid uun 200 + OTAs iyo goobaha liis garaynta tan Zeevou Maareeyaha Channel dhexgalo.
Kalsoonida macaamiisha iyo daacadnimadoodu waa habka ugu muhiimsan ee lagu dammaanad qaadayo guushaada ku soo dhaweynta martigelinta. Martidaadu waxay rabaan inay hubiyaan inay leeyihiin waayo-aragnimada ugu fiican ee ballansashada muddo gaaban ah oo laga sii daayo shirkaddaada iyo degelka tooska ah ee ballansashada. Waxaa jira dariiqooyin badan oo lagu kasbado kalsoonida macaamiishaada, laakiin midda ugu muhiimsan ayaa ah inaad u xaqiijiso inaad ku jirto dhinacooda, aad heshay dhabarkooda oo aad u fidisay heshiiska ugu fiican ee suurtogalka ah. Siinta martida qiimo dhimis iyo u helida inay ka xareeyaan hanti shabakadaada qiimo jaban waa talaabada ugu horeysa ee habkan.
Adoo adeegsanaya Dhiirrigelinta Zeevou, waxaad ka caawin kartaa wadista taraafikada boggaaga oo aad dhisto daacadnimo sumcad leh. Qiimo-dhimista ayaa ah dariiqo hubaal ah oo lagu sasabto martida inay si toos ah kula ballansadaan. Macaamiisha waxay raadiyaan qiimaha ugu fiican, marka markay arkaan boggaaga ballansashada tooska ah sida midka iyaga ku siiya qiimo dhimis xiiso leh, waxay aad u xiiseyn doonaan inay guri kaa ballansadaan fasaxooda, safarkooda ganacsi, ama joogista magaalo kale oo waqti gaaban waxbarasho darteed. Marka la eego in iyaga looga dhigi karo shuruud isticmaalka nambarada foojarka, waxaad u adeegsan kartaa muuqaalkan xitaa waddamada halka qodobbada sicirka-sinnaanta lagu dabaqo OTAs.
Waxaan daneyneynaa guusha ganacsigaaga halkan Zeevou. Sidaas, by codsanaya demo bilaash ah iyo isticmaalkayaga muuqaalada waad kobcin kartaa guushaada.